Egwuregwu mma agha! Ninja Slice Runner Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Egwuregwu mma agha! Ninja Slice Runner Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na nchịkwa | Ọktoba 31, 2021
Mepụta agụba gị, mma agha nna ukwu! Ọ bụ oge ịmalite njem n'ezie shinobi!
Nnọọ na egwuregwu mma agha! - egwuregwu egwuregwu na-atọ ụtọ ebe naanị ihe ị ga - eme bụ dash, slash & iberi!
Gbanye ọtụtụ narị ọkwa dị egwu wee bechapụ ebumnuche gị niile nke na-anwa igbochi gị! Ị nwere ike igosi na ị bụ ezigbo onye isi akụ?
Wetuo oge wee gbue mgbọ na-efe efe, Iberibe orù mgbawa na ọkara ma tie nnukwu suricens azụ ndị iro gị stickman!
Egwuregwu egwu egwu dị oke mfe. Naanị ihe ị ga-achọ bụ ịfefe na ihuenyo ekwentị iji belata mkpọmkpọ ebe n'ime halves.
ỤKWA NKE NDỊ IRO
Ihu aghụghọ stickman shinobi, ndị isi egbe na ndị isi dị ike! Ị ga-ese n'elu dị ka urukurubụba ọ gwụla ma ị chọrọ ka ebibie onwe gị. Ekwela ka samurai ọ bụla mee ọkọ!
Mma agha na-egbu egbu
Ọrụ samurai zuru ezu iji kpọghee mma agha kachasị dị ize ndụ n'ụwa! Ngwa agha gị gụnyere Infinity Blade, Agụụ Katana, Saber nke Ọchịchịrị, Kpoo Blade, Arthur's Excalibur, na ngwa ọgụ ndị ọzọ nwere agba agba. Jiri ike dị ukwuu nke mma agha gị tipịa ha niile!
PERKS dị ukwuu
Ninja mara mma na-ewe ohere ọ bụla iji merie ndị iro ha! Akwụsịla iji nsị, tomahawks na ọbụna lasers iji weda ndị niile na-emegide stickman n'ọkwa slicing.
Enweghị ego ma ọ bụ usoro ọmụmụ nwere ike ime dike slicing! Jide mma agha ma gosi ndị iro ragdoll gị onye bụ ezigbo nna ukwu agụba! Budata otu egwuregwu mma agha agụba 3d kacha mara mma ugbu a wee kewaa ha niile!
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Ninja, Gwuo, Onye na -agba ọsọ, Slice, Mma agha
← oge egwuregwu poppy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Anyanwụ na-amụkwasị anyị – Aghọ Aghụghọ Anya&Mbanye anataghị ikike →
One thought on “Egwuregwu mma agha! Ninja Slice Runner Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike”
zortilonrel Nọvemba 14, 2021